Khabiirka Kala Duwan: Sida Loogu Joojiyo Qaadista Wareejinta Qalabka Google Analytics
Ganacsiyada internetka waxay u baahan yihiin jiilka gaadiidka iyo isbedelka kor u kacaku noolaadaan suuqa. Xaaladdan, falanqayntu waxay kaalin weyn ka qaadataa sidii loo gaadhi lahaa gaadiidka qiimaha sare leh iyo is-beddelada kordhaya. Ganacsiyadaiyada oo ujeeddo gaar ah oo lagu abuurayo taraafikada boggooda internetka waa in ay lahaadaan cabbir ujeeda inay sheegaan nooca gaadiidka lagu beddelayo asicirka sare. Badanaa, ganacsatadu waxay abuuraan content si ay u daboolaan baahida iyo macaamiisha - baumwoll musselin meterware. Nooc cusub oo asal ah oo asal ah waahad iyo jeer u doodo marka ay timaado suuq-geynta suuq-geynta.
Dhibaatadu waxay timaaddaa marka la gudbiyo spam, cadowga falanqaynta ee badali karaXogta waxay qaadataa ka ganacsiga. Spam diritaanku wuxuu u shaqeeyaa inuu baddalo xogta saxda ah adoo la xariira lambarada diiwaangashan, waxay u badan tahay ingaadiidka. Nasiib wanaag, Google wuxuu leeyahay sidan oo kale si loo hubiyo in ganacsiyada ay isku dayayaan in ay ku guuleystaan ​​internetka inaysan ku fashilmin.
U fiirsashada xogta saxda ah ee shirkadda B2B iyo shirkadda B2C? Michael Brown, Sare Maamulaha Guusha Macaamilka, wuxuu ku siinayaa feejignaantaada tilmaan kaa caawin doona inaad ku wanaagsanaato adoon wax dhibaato ah la kulmin.
Qaadashada Dib-u-celinta ee spam gudbinta
Bilowga kuwa u baahan kuwa aasaasiga ah, gudbiyaha ayaa ah websiteka ka adkaaday goortabooqde ayaa ka socda hal bog bogag kale. Haddii booqdaha ay ku riixdo isku-xire ah oo lagu soo daabacay maqaal gaar ah, xiriirku wuxuu noqon doonaalagusoo qoraa Google Analytics sida ilaha gudbinta. Ilaha gudbinta waxaa badanaaba loo adeegsadaa in ay abuuraan fikrado ku saabsan sida qiimaha loo qiimeeyowaa in ganacsiga laga helo..
Macluumaadka ku saabsan spam gudbinta
Spam diritaan ayaa ah tan ugu horraysa laba nooc oo ay ka mid yihiin:
Xayeysiinta gudbinta baddelka
Tani waa spam gudbinta been abuur ah oo ka shaqeeya been abuur ah. Spam wuxuu u shaqeeyaakicinta xawaaraha iyo u bixinta magac ku habboon si loo abuuro taraafikada una muujiso warbixinta Google Analytics. Spam references xaashida ayaa sii socotain aad u dirto isku xirnaanta boggaaga si aad u soo ururiso gaadiidka badan Si kastaba ha ahaatee, magaca loo isticmaalo spam gudbinta marwalba waa been abuur iyo caddaalad maadaama uu ku dhacoSpam referential spoof
Spam u gudbinta ruuxa
Spam u gudbinta Ghost waxaa inta badan ku shaqeeya badeecada aan caddaaladda aheyn oo leh hal shayUjeedada ah in kor loo qaado bogga qaarkood
Xakameynta spam u gudbinta adeegsiga Google Analytics
Google Analytics wuxuu u shaqeeyaa inuu xakameeyo labada tarjumada iyo spam u gudbinta labada ruux ee ugu badanhab wax ku ool ah. Si aad u hesho liiska dhammaan spam gudbinta, tag Google Analytics oo riix tabinta warbixinta. Xulo wakhtiga xaddidan adigadoonayaan kadibna dooro dhagaystayaasha, oo ballaadhiyaan xulashada shabakada. Ku soo wareeji marti-geliyeyaasha oo soo ururi dhammaan marti-geliyayaasha aan ansaxa ahayn. Abuuri acadeynta joogtada ah ee xayiraya dhammaan marti-geliyayaasha aan saxda ahayn iyo gudbinta ee Google Analytics.
Bixiyeyaasha digitalka ah ayaa sidoo kale xannibi kara spam gudbinta iyadoo la isticmaalayo ilaha ololaha. Kani waama aha oo kaliya xulasho lagu kalsoonaan karo si loo xakameeyo spam u gudbinta laakiin midda fudud. Doorashadan, mid ka mid ah ma fulin filterka martida, laakiin halkiiilaha ololaha. Hesho olole firfircoon oo ku jira boggaaga internetka adiga oo la tacaalaya hanjabaadaha xaasidnimo iyo isfahaminta gudbinta.